Antsafa nifanaovana tamin’i Erick Huerta, mpikaroka iray manampy amin’ny hahatongavan’ny aterineto any amin’ireo fokonolona indizeny ao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Giovanna Salazar Nandika (en) i Teodora C. Hasegan, Andriamifidisoa Zo
Voadika ny 27 Novambra 2019 5:32 GMT
Sary avy amin'i Carlos Baca, tao amin'ny pejy Facebook CITSAC hitan'ny daholobe. Nahazoana alalana.
Tamin'ny fiafaran'ny volana Jona 2019, natsangana tamin'ny fomba ofisialy tao Mexico City ny Foibem-pikarohana momba ny Fahalalana ny Teknolojia sy ny Vondrompiarahamonina (CITSAC) (CITSAC ny fanafohezana azy amin'ny teny Espaniola).
Iray amin'ireo tetikasa ankehitriny ao amin'ny CITSAC ny fametrahana tambajotra mandeha zanabolana izay hahafahan'ny fiarahamonina hahazo finday sy tolotra aterineto amin'ny vidiny mirary ao Metlaltónoc (fanjakana Guerrero), iray amin'ireo kaominina mahantra indrindra ao amin'ny firenena.
Miasa miaraka amin'ny koperativa Tosepan Titataniske (iray amin'ny koperativan'indizeny lehibe indrindra mahasahana ny firenena, miorina ao amin'ny fanjakana Puebla, Meksika) hamolavola endrika ny rafitra fandrakofana an-tsela ihany koa ny CITSAC.
Ny CITSAC dia mifototra amin'ny fiarahamiasa eo amin'ireo fikambanana roa izay nampiroborobo ny fifandraisana sy ny fifandraisandavitra ho an'ny fiarahamonina sy indizeny sy ambanivohitra ao Meksika sy ny faritra: Tambajotram-Pahasamihafana, Fitoviana sy ary Fahazakàna A.C. (REDES A.C.) sy ny Rhizomatica: Izy roa ireo no mpitarika ny tambajotram-piarahamonina an-tsela (cellulaire) voalohany tamin'ny alalan'ny Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (Vondrom-piarahamonina fifandraisandavitra indizeny).
Vao faramparany teo, nisy fiarahamiasa isankarazany natsangan'ireo orinasa hanolotra aterineto ao amin'ny faritra; eny fa na dia ny governemanta meksikana aza dia nampiseho fahalianana amin'ny fiaraha-miombona amin'ny Facebook hisian'ny fahazoa-miserasera any amin'ny faritra ambanivohitra.
Fikarohana iray nataon'ny Global Voices tamin'ny taona 2017 momba ny hatra finday Free Basics an'ny Facebook (izay nokendrena “handravona ny hantsana nomerika”) no nahita fa tsy mahafeno loatra ny filàn'ny vondrom-piarahamonina nokendrena hiserasera, nefa mety hanitsakitsaka ny zon-dry zareo, io servisy io.
Amin'izao fisokafan'ny CITSAC izao, nantsafain'ny Global Voices i Erick Huerta, mpandrindra ankapobeny lefitra ao amin'ny REDES, A.C. sady mpanao fikarohana momba ity santa-draharaha ity.
EV: Roa lehibe ny fikarohana ataonay: iray aloha ny miasa amin'ny olana sy hetahetan'ny vondrom-piarahamonina indizeny mifandraika amin'ny fifandraisana; katroka-karoka izany, izay midika hoe mamantatra hetsika na olana iray ny vondrom-piarahamonina, ary misy vondrona mpikaroka atsangana hiasa amin'ireo olana ireo. Vokatr'izany karazam-pikarohana izany, ohatra, ny Guide for the Design of Communication Strategies for the Defense of the Territory, [Taridalana hanomezana endrika ny tetipanorom-pifandraisana hiarovana ny zaratany], izay natolotray tamin'ny fanokafana ny Foibe.
Kinendry iray hafa ny karoka eo amin'ny fampivoarana fitsipika, mitodika amin'ny hahazoan'ireo vondrom-piarahamonina ireo miditra servisy taranaka fahaefatra (4G) na (Long-Term Evolution, LTE). Amin'izany izahay mila karazan'avana (spectre). Ny olona anefa dia manan-tompo avokoa ny ankamaroan'ny avana LTE ary, avy amin'izany dia mila mampivelatra rafitra-avana azo zaraina izahay ahafahan'ny avana misy amin'izao fotoana—izay tsy miasa—mba ho azo zaraina, mba ahafahan'ny vondrom-piarahamonina mampiasa azy.
EV: Maro ny olana ao amin'ny vondrom-piarhaamonina izay mifandraika amin'ny fiarovana ny zaratanin-dry zareo (fototr'izany ny fanesoran'ny orinasa sy ny governemanta ny tanin-dry zareo satria ilain'ireo ny loharanombolan'ny vondrom-piarahamonina). Miantraika betsaka amin'ny vondrom-piarahamonina ireo olana ireo, potika sy misaratsaraka ry zareo, satria lasa misy asa-jiolahy koa izay tsy niainan-dry zareo taloha ao amin-dry zareo. Mampisara-tsaina ny vondrom-piarahamonina na dia ny karazam-pifandraisana nitranga aza. Vokatr'izay, efa ho dimy taona izay, niasa izahay hanangana taridalana izay ahafahana mametraka fifandraisana mahomby kokoa ary hanamafy orina ireo vondrom-piarahamonina tafiditra ao amin'izany fizotra izany. Hita ao amin'ny Taridalana endrika paikadim-pifandraisana ho fiarovana ny zaratany ny vokatry ny fikarohana mifototra eny an-kianja mifantoka amin'ny zava-niainan'ireo vondrom-piarahamonina ireo.
Etsy andaniny, mahia loatra ny fitsipika mifehy ny tambajotram-piarahamonina manerana an'i Amerika Latina, maro amin'ireo governemanta oreo no tsy mahalala hoe inona moa ireo, inona ny olana ara-pitsarana atrehan-dry zareo, ny dikan-dry zareo, na ny toerana iasan-dry zareo, ka matetika ny politika fanaovan-dalàna no tsy mety amin'ireo tambajotram-piarahamonina ireo. Miasa izahay amin'ny fanangonana traikefa, mampiditra azy ireny ao anaty rafitra, manome rafitra ara-pitsarana ho azy ireny, mamantatra hoe politika tahaka ny ahoana no mety amin-dry zareo, ary manomana dosiem-pikarohana, ohatra, ny tatitra “Tambajotram-piarahamonina ao Amerika Latina. Fanamby, Fitsipika sy Vahaolana“.